32-bit zvishandiso hazvishande muIOS 11 | IPhone nhau
Pamwe pamwe nehurukuro yepamutemo yeIOS 11 uye kubudiswa kwekutanga beta, taona kuti Apple yakasarudza sei kubvisa zvachose chero maitiro ekushandisa akagadzirirwa chete 32-bit zvishandiso. Sezvo isu taigona kuona mune yakakosha, iOS 11 inongowirirana chete neese maApple madivayiri anotungamirirwa ne64-bit processor, ndiko kuti, kubva ku iPhone 5s, iyo Mini Mini 2 zvichienda mberi uye yechitanhatu chizvarwa iPod touch.
Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa nezve kubviswa kwenhamba hombe yezvishandiso zvakagadzirirwa 32-bit zvishandiso, zvishandiso zvisina kuongororwa, Apple yakamanikidzwa kuvabvisa kubva kuApp Store. Asi zvakare, iwo atingave takaisa pane edu zvishandiso, nekuuya kweIOS 11, inomira kushanda.
Parizvino, iOS 11 iri mumaoko evagadziri, avo vakwanisa kuongorora kuti kana vachiedza kuvhura application yakagadzirirwa chete ma32-bit processors, inotiratidza meseji inotizivisa kuti iko kunyorera kunofanirwa kuvandudzwa kuitira kumhanya pane yazvino vhezheni yeIOS iyo ichazoburitswa zviri pachena kuruzhinji munaGunyana, pamwe mukubatana nekuvhurwa kwemhando nyowani dze iPhone.
Apple iri kuita zvese zvinobvira kumisa vashandisi kubva kushandisa izvi zvinoshandiswa uye danho rekutanga rave rekubvisa kubva kuApp Store. Iyo yechipiri inogumira mashandisiro ayo kune shanduro pamberi peIOS 11, nenzira iyi inova nechokwadi chekuti iri kuramba ichioma kuishandisa, kunze kwekunge tiine kopi yavo pakombuta yedu neTunes. Zvinoenderana nekufungidzira kwekutanga kwakaburitswa mwedzi mishoma yapfuura, kubviswa kwezvikumbiro izvi kwaizoreva kudzikiswa kwekushandisa mazana maviri ezviuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » 32-bit maapplication haashande pane iOS 11
Dambudziko reizvi rinouya kana maapplication amira kuvandudzwa kana akabviswa muchitoro cheapp se projekiti83113 isingashande kwandiri U_U
Pindura kuna hebichii
DriveTribe, pasocial network yevanoda mota